नेपालको महिला बडिबिल्डिङ्ग - मेरो सोंचाइ गलत होस | Fitness Nepal
नेपालको महिला बडिबिल्डिङ्ग - मेरो सोंचाइ गलत होस
१२-१५ वर्ष अघिसम्म हाम्रा महिलाहरुलाई जिम जानु, व्यायाम गर्नु भनेको फलामको चिउरा चपाउनु सरह थियो । पाक्क पुक्क मसल्स निकाल्नु त केवल केटाहरुको काम हो भनी जिमकै बाटो हिंडे पनि डेंडो आँखाले पनि फर्केर हेर्दैनथे । अहिलेको अवस्था त्यस्तो छैन । काठमाडौंमा मात्र सिमित नभई देशभरिका मुख्य शहरहरुमा छ्यापछ्याप्ती जिमहरु खुलेका छन । हाम्रा महिलाहरु पनि अहिले स्वास्थ्य र व्यायाम प्रति सचेत हुन थालेका छन । शुरुमा प्रचलित जुम्बा फिटनेसमा भर्ना भई बिस्तारै वेट ट्रेनिङ् तिर आकर्षित हुँदै गएका छन अनि वेट ट्रेनिङ गर्दै बडिबिल्डिङ्ग तिर लम्किंदै छन । यसरी बडिबिल्डिङ्ग अंगाली स्वास्थ्यप्रति जागरूक हुनु सलाम योग्य छन ।
आज हाम्रा महिलाहरु बडिबिल्डिङ्ग तथा फिटनेस प्रतियोगीताहरुमा खुलेर लाग्न थालेका छन र सार्है प्रशंसनीय छ यो कदम । हिजो डेंडो आँखाले पनि नहेर्ने जिममा आज उनिहरु फलामसँग रमाउन थालेका छन, बलिष्ठ शरीर बनाउन अग्रसर भएका छन । सामाजिक संजालका कारण थुप्रै विदेशी महिला बडिबिल्डर तथा फिटनेस मोडलका तस्वीर र भिडियोका कारण पनि यस खेलप्रति महिलाहरुको आकर्षण दिनानुदिन बढेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । क्षेत्रीय तथा राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगीता हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगीतामा उत्तिकै संलग्नता देखाउन थालेका छन । यसरी प्रतिस्पर्धामा उत्रने हिम्मत जुटाउने हाम्रा महिलाहरुलाई विशाल तालीको ध्वनिले हौस्याउन मन लाग्छ र हृदयदेखि नै धन्यवाद टक्रयाउन मन लाग्छ ।
बडिबिल्डिङ्ग अनि प्रतिस्पर्धा निकै नै कठोर हुन्छ र जसरी भए पनि च्याम्पियन बन्ने हर खेलाडीले सपना बुनेको हुन्छ । जसरी पनि जित्ने सपनाभित्र कुनै पनि कसर बाँकी नराख्ने मनसायले डेरा जमाउन सक्छ र यो अन्तरालमा शरीर भव्य बनाउन छोटो बाटो अंगाल्न पनि पछि नहट्ने मानसिकताको विकास हुनसक्छ । बडिबिल्डिङ्गको अहिले हामी माझ प्रचलित छोटो बाटो भनेको स्टेरोइड हो । स्टेरोइडको धेरै गहिराइमा नगई सरल भाषामा भन्नु पर्दा यो ग्रोथ हर्मोन हो जसले शरीरको मांसपेशीहरुको अलौकिक विकास गर्दछ । प्राकृतिक रुपमै महिलाको शरीरमा पनि टेस्टोस्टेरोन नामक हर्मोन उपस्थित हुन्छ जसलाई पुरुष हर्मोन भनेर पनि भनिन्छ । महिलामा टेस्टोस्टेरोन पुरषको तुलनामा धेरै कम हुन्छ र जति कडा वेट ट्रेनिङ गरे पनि पुरुषको जस्तो महिलामा अत्याधिक रुपमा मांसपेशीको विकास हुन सक्दैन । यसरी कुनै पनि हालतमा ठूलो ठूलो शरीर बनाएर देखाउन र जित्ने भूत सवार भएपछि स्टेरोइडतिर आकर्षित हुन इन्द्रेको बाउ चन्द्रे आए पनि रोक्न सक्दैन ।
"एकचोटि प्रयोग गर्दा के नै बिग्रेला र? अनि कसले पो थाहा पाउला र? जसरी नि जित्ने हो" भन्ने मनसायलाई मध्यनजर गर्दै स्टेरोइडको प्रयोगतर्फ हाम्रा महिला बडिबिल्डरहरु पनि लालायित नहोला भन्न सक्ने अवस्था छैन अहिले । भविष्यमा यसले आफ्नो शरीरमा कस्तो असर गर्न सक्छ, मानसिकतामा कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ भनेर ठम्याउनु बुद्धिमता हुन्छ । एकचोटि प्रयोग गर्दा के बिग्रेला भनेर सोच्नु सही वा गलत भन्नु भन्दा पनि कृत्रिम हर्मोन एकचोटि शरीरभित्र छिरेपछि प्राकृतिक रुपमै शरीर आफैंले उत्पादन गर्ने हर्मोन ठ्याक्कै बन्द हुन्छ र यो बाह्य हर्मोन शरीरभित्र रहुन्जेल शरीरले यस हर्मोनको उत्पादनमा रोक लगाउँछ । फलस्वरूप, यसले शरीरमा असर त पक्कै गर्छ । तपाईंको शरीर राम्रो त पक्कै बन्छ, हजार-दुई हजार ईन्स्टाग्राममा फलोवर पनि बढ्ला, फेसबुकमा लाइकको वर्षात होला अनि कमेन्टको धुइरो लाग्ला । एकछिन तपाईं मख्खै पर्नु त हुन्छ तर तपाईंको शरीर भित्र र बाहिर भएको परिवर्तन त तपाईं आफैंलाई थाहा हुन्छ । प्रकृतिले नै निर्धारण गरिदिएको हुन्छ कि महिलाको शरीरमा कति टेस्टोस्टेरोन हुनुपर्छ भनेर, होला कसैको अलि कमि र कसैको अलि धेरै तर पुरुषको जत्तिको हुनु चैं चमत्कार सरह नै हुन्छ । यसरी मांसपेशी (मसल्स) बढाउने तानामा शरीरभित्र हुलिएको अत्यधिक स्टेरोइडको असर त शरीरले पक्कै पनि देखाउँछ, हाम्रो शरीरले ह या छोड्दे एकचोटिलाई भनेर अवश्य पनि भन्दैन । हाम्रो शरीर आफ्नै प्राकृतिक चक्रमा चलेको हुन्छ । यसरी महिलामा हुने भन्दा अत्यधिक ग्रोथ हर्मोनको कारण पुरष जस्तै शरीरमा मांसपेशीको बृद्धि सँगै पुरुषको गुणहरु पनि बिस्तारै विकास हुनसक्छ जस्तै, स्वर धोद्रो हुने, कपाल पातलो हुने वा झर्ने, अनुहारमा अनावश्यक रौं पलाउने, हेर्दा पुरुष जस्तो देखिने, डन्डिफोर आउने जुन आँखाले प्रष्ट देखिन सक्छ । महिलामा देखिने यो परिवर्तन बडिबिल्डिङगको "ब" पनि थाहा नहुनेले पत्ता लगाउन सक्दैन तर थाहा हुनेले सजिलै पत्ता लगाउन सक्छ । महिनावारीमा गडबड हुने, योनाङ्गमा परिवर्तन आउने जस्ता प्रभावहरु थुप्रै अनुसन्धानहरुले पुष्टी गरिसकेका छन र यो गुप्त रहने प्रभावहरु तपाईं आफैंले भोग्ने कुराहरु हो जुन तपाईंलाई बाहिर ल्याउन निकै असहज हुनेछ ।
स्टेरोइडको असर यत्तिकैमा खतम हुँदैन, यसको असर त प्रतियोगीता पछि शुरु हुन्छ खासमा । सोच्नु भएको होला एकचोटि स्टेरोइड प्रयोग गरेपछि सधैं उत्तिकै राम्रो ज्यान भइराख्छ, गलत । तपाईंको शरीरको गुणस्तर प्रतियोगीताको भोलिपल्ट देखि नै खस्किन थाल्छ र तपाईंले सोंचे भन्दा फरक भएर जान्छ । एउटा प्रतियोगीता जितेपछि बधाइको ओइरोलाई तपाईं थेग्न नपाउँदै शरीरमा भएको परिवर्तनले तपाईंलाई नपिरोल्ला भन्न सकिन्न । प्राकृतिक यत्तिकैमा अब तपाईंलाई उस्तै शरीर बनाउन हम्मे हम्मे पर्छ । अनि यो "जादूको जुस" बिना शरीर बनाउन नसकिने रहेछ भन्ने मानसिकताले जरो गाड्न थाल्छ । यसरी सोच्दा सोच्दै अर्को प्रतियोगीताको मिति तय हुन्छ र पुनः तपाईं जित्ने मनस्थितिमा पुग्नुहुन्छ । यसपाली यो "जादूको जुस वा चक्की" बिना प्रतियोगीतामा भाग लिन सोच्न पनि मन लाग्दैन तपाईंलाई । हो, यसरी नै बिस्तारै स्टेरोइडको दलदलमा फस्दै जाने हो । जसरी तपाईंले अरुको देखेर यसलाई अंगाल्नु हुन्छ, अरुले पनि तपाईंलाई देखेर त्यहि पछ्याउँदै जाने हो, अनि सबैको मानसिकता पनि त्यस्तै हुँदै जाने हो । एकपछि अर्को गर्दै यसको प्रयोगको कुख्याति बढ्दै जान्छ र कालान्तरमा यसले सिंगो देशलाई नै धराशायी बनाइदिन्छ ।
हिजो जिम जान पनि गार्हो हुन्थ्यो, आज अलि स्वस्थ शरीर बनाउन लालायीत हुँदै पुनः अस्वस्थता तिर लम्कने अभ्यासलाई एक पटक घोत्लिएर सोच्नैपर्छ । आउने नयाँ पुस्ताले के सिक्ने, कसलाई पछ्याउने भन्ने कुरा तपाईं हाम्रो मुटुमा ढ्याङ्रो ठोक्ने बेला आएको छ । एक जनाले एकचोटि दुईचोटि गर्दै थुप्रैले यो छोटो बाटो रोजे हाम्रो जस्तो देश जहाँ स्वास्थ्यको बिषय शुन्यमा छ, यसले देशको भविष्यको स्वास्थ्य क्षेत्रको के हविगत होला । बिदेशीहरुले त प्रयोग गर्छन भनेर उत्तेजित हुनु हुँदैन, बिदेशीहरुमा (नेपाली नै भए पनि) पनि पश्चिमाहरुको स्वास्थ्यको सिस्टम हामीले सोचे भन्दा धेरै राम्रो छ । कुनै चिज प्रयोग गर्नुपूर्व आफ्नो स्वास्थ्यको परिक्षण गर्छन, डाक्टर सित परामर्श लिन्छन । केहि बिग्रिहाले पनि स्वास्थ्यको बिमा हुन्छ, सरकारले हेरबिचार गरिदिन्छ तर हाम्रो देशमा त त्यो संभव छैन र हामी स्वयं सचेत हुनु जरुरी छ । एकचोटि स्वास्थ्य बिग्रिए त्यसलाई सुधार्न हामीलाई पुरा जिन्दगी लाग्दछ । अझ रोचक कुरा त संसारकै सबैभन्दा लोकप्रीय खेल ओलम्पियाबाट महिलाको बडिबिल्डिङ्ग प्रतियोगीता हटाइएको छ, कारण महिलाहरुको अत्याधिक स्टेरोइड प्रयोगले महिला महिला जस्तो नदेखिई पुरष सरह गठिला शरीर भएको र यसले महिलातर्फको बडिबिल्डिङ्गमा नकारात्मक असर गर्ने र कालान्तरमा महिलाको स्वास्थ्यमै असर पर्ने हुनाले भन्ने कुरा ठम्याउन गार्हो नपर्ला । यो कुरा तपाईं हामी सबैले एकचोटि मनन गर्ने बेला आएको छ, ढिला नगरौं । यो हाम्रो बडिबिल्डिङ्ग क्षेत्र त्यति बिग्रिसकेको छैन । यसलाई बिग्रिन बाट हामीले नै पहल गर्न सक्छौं । अन्त्यमा, हाम्रा महिलाहरु पनि बडिबिल्डिङ्ग र देश बिदेशका प्रतियोगीता जित्ने होडमा स्टेरोइडको प्रयोगतर्फ लालायीत भएको मेरो सोचाइ गलत होस ।